पेजोक/PEZOK : थुक्क ! सपना पनि
थुक्क ! सपना पनि
‘एम ए सकिएको ठीक एक वर्ष भएछ।’ कर्मले पारी क्षीतिजतिर हेर्दै प्रयासलाई भन्यो। ‘हो, त्यही एक वर्षको पर्खाइमा हामीले केके झेल्यौँ। केके भोग्यौँ साह्रै मर्मभेदी र पीडादायक छन्। समय कस्तो जटील भइसकेछ, आहा!’ दुवैजना बात गर्दै आज हुने इन्टरभ्युको लागि विप्लवलाई पर्खिरहेछन्।
समय धेरै भइसक्यो विप्लव आइपुगेको छैन। खुब आनन्दसँग दुवैको बात पनि मेल खाइरहेछ। घरिघरि कर्मले घडी पनि हेर्छ। पर्खँदापर्खँदा पनि नभएर कर्मले भन्छ- ‘ऐ विप्लवको घरममा फोन लगा, किन त्यसले ढिलो गर्यो।!’
‘आन्टी म कर्म बोलेको खोइ त्यो विप्लव त अझै पनि यहाँ आइपुगेको छैन। इन्टरभ्युको लागि ढिलो भइसक्यो।’ ‘हँ हन त्यो त अगि गयो त! त्यहाँ आइपुगेको छैन? ‘छैन आन्टी।’ ‘त्यसो भए पर्ख म त्यसको कोठामा हेर्छु।’ ‘हवस!’
विप्लवको कोठामा गएर आमाले हेरे। विप्लव मस्त सुतिरहेको छ। घरिघरि अनुहार मुस्कुराएको जस्तो पनि देखिन्छ। एकक्षण आमाले पनि छक्क परेर हेरेर फतफताउँछे- ‘हन यसलाई के भयो यत्ति बेलासम्म पनि उठ्दैन। पर्खी तेरो....।’
विप्लवको चाखमा एक झ्यापट कस्छे। ऊ झोँक्किएर जुरूक्क उठ्छ र आमालाई टूलटूल हेर्दै नुहाउने कोठामा पस्छ। अनुहारमा पानी छेप्छ अनि ऐनामा हेरेर मुसुक्क मुकुराउँछ फेरि भन्छ- ‘थुक्क सपना पनि!’
Posted by Rupesh at 12:07 AM
फोटो ग्यालरीगाउँमा पहिले साना छँदा ठूलाहरूले राम्र...
फोटो ग्यालरी यो तस्बिर धेरै पुरानो हो। यो तस्बिरमा...
कविताका सृजनामा सपना र इच्छा